Taliska Booliska oo sheegay laba Askari inay ku dhinteen Qaraxii Ciidanka lala eegtay | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home News Taliska Booliska oo sheegay laba Askari inay ku dhinteen Qaraxii Ciidanka lala...
Taliska Booliska oo sheegay laba Askari inay ku dhinteen Qaraxii Ciidanka lala eegtay
Taliska Ciidanka Booliska Somaliya ayaa waxa ay faah faahin ka bixiyeen Qarax Miino oo saaka lala eegtay Ciidamo ka tirsan Booliska, kaasi oo ka dhacay Degmada Hodan.
Qaraxan oo ka dhacay agagaarka Taleex ee degmada Hodan abaaro 10:00 barqanimo ayaa qabsaday gaari nuuca (Landcruser-ka) ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliyeed, waxaana ku dhintay 2 askari halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo la socday gaarigaasi oo miinadu ay la kacday.
“Waxaa saaka dhacay qarax nuuca miinada dhulka lagu aaso oo soo boodada ah,waxaana ay lakacday gaari ay saarnaayeen askar ka tirsan booliska,2 askari waa ay ku geeriyootay,2 kalena waa ay ku dhaawacyeen, oo gaariga la socday,mana jiraan dad shacab ah oo waxyeelo soo gaartay”. Sidaasina waxaa SONNA u xaqiijiyay afhayeenka ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Al shabaab ayaa sheegatay masuuliyadda Qaraxaasi lagu dilay labada Askari, labada kalena ay ku dhaawacmeen ee lala eegtay Ciidamada Booliska Somaliya.